माओ त्से तुङ | Ratopati
अनुशासनका तीन नियम र ध्यान दिनुपर्ने आठ कुराहरु access_timeपुस ११, २०७६
माओत्सेतुङ अनुशासनका तीन नियम –आफ्ना सबै कामकार्वाही आदेश पालना गर । –जनताबाट एउटा सियो र एक डोरो धागोसम्म पनि नलेऊ । –जफत गरेका सबै चीज बुझाऊ । ध्यान दिनुपर्ने आठ कुराहरु –नम्रतासाथ बोल । –किनेको चीनको उचित मोल तिर ...
कोरियाली क्रान्तिको रक्षार्थ सहिद भएका आफ्ना छोराको मृत्युलाई माओले कसरी लिनुभएको थियो ? access_timeपुस ११, २०७६
एकपटक सुङलिङले आनइङ दाइका अवशेषहरु कोरियाबाट चीन ल्याउन लगाउनका लागि बुबासँग अनुमति माग्नुभयो । तर, उहाँले टाउको हल्लाएर आफ्नो असहमति जनाउनुभयो र भन्नुभयो– “सहिदहरुलाई जहाँकहीँ पनि गाड्न सकिन्छ । आखिर हामीले किन उनका अवशेषहरु यहाँ ल्याउने ? के चिनि...
माओको शिक्षाः जनताको चीज नछुनु access_timeपुस १०, २०७६
आज डिसेम्बर २६ । आजैको दिन महान् क्रान्ति नायक माओ त्से तुङको हुनान प्रान्तको साओसानमा एक किसान परिवारमा जन्म भएको थियो । विश्वक्रान्तिका महानायक, जसले माक्र्सवाद–लेनिनवादको क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई अन्धनक्कल गरेर हैन, आफ्नै मौलिकता र विशिष्टताको आधारमा त्यसलाई विकास...